China Ropa Kuunganidza Tsono Assembly Machine vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Ropa Kuunganidza Tsono Kuungana Mutsetse
Zvepeni mhando yeropa rekuunganidza tsono yekugadzira.
Tsono mubati kurodha → Tsono kurodha → Gluing → Kuomesa → Kuonekwa kwepiniki kuvharira → Kuonekwa kwetsono burrs → Siliconization → Waste kubviswa → Yakareba-tsono inodzivirira kavha Kuisa → Kuvhara kudzvanya → Tsono inodzosera → Nyoro kuchengetedza chivharo kurodha → Kuvhara kudzvanya → Pfupi-tsono inodzivirira kavha Kuisa → Kavhara kudzvanya → Yapedza chigadzirwa.
Kushanda Chiteshi Tsananguro
Tsono mubati kudyisa
Bata iyo inobata tsono neiyo vibrator, wobva wapinda munzira yekutsvedza woiisa patambo yekushandisa.
Kuisa iyo tsono pane iyo tsono nzira yekutsiga, tsono inosimudzwa kumusoro kune chetsono chigaro nekukanya tsono yechigaro chetsono uyezve yobva yadonhedzwa kuchigaro chetsono, mushure mekurodha tsono, tendeuka nzira uye upinde chiteshi chegluing.
Pano shongedza pamwe nekuonekwa kwetsono
Gluing inotyairwa neJapan Panasonic servo mota, uye maviri magegedhi madhairekitori anowedzerwa kutyaira iyo glue tireyi kugovera glue. Glue tireyi bhokisi rinotora reGerman Lenuz kuti riongorore otomatiki kana iro grey tireyi bhokisi riine guruu kana kwete, uye kana pasina glue muchina unomira otomatiki, uye iyo alarm inoratidzwa pane yekubata skrini.
Tunnel yekuomesa ndeyekuomesa iyo glue, iro rekuomesa bhokisi rinopiswa negirazi chubhu simbi isina simbi yekupisa waya, ine yazvino ratidziro geji, tembiricha controller inodzora tembiricha kusvika padanho. Pinda kuonekwa kwemufananidzo mushure mekuoma.
Kuonekwa kwepini kuvhara
Kuona kuti tsono yakavharika here kana kuti kwete. Iyo nzira yekufema mweya. Zvinotongwa kuti tsono yakavharwa nemhepo here kana kuti kwete. Iyo sensor inoona imwe-kune-imwe uye yakagadzirirwa barometer. Kana kumanikidza kwemhepo kukasati kwasvika pamwero, zvinobva zvango Shinyira uye kubvisa tsono yakavharwa kubva kumutsara mukuru. Tendeuka nzira pachiteshi chinotevera.
Kuonekwa kwetsono burrs
Pano chiteshi chinogona kushongedzera neCCD kuona kweiyo bhero burrs. Kana zvigadzirwa zvisina kukodzera zvikaonekwa, zvinozobviswa munzvimbo yekuveura ndebvu, zvobva zvapinda mukuonekwa kwakaburitsa. (Iyo tsono tip kukwirira shiviriro iri mukati me0,3, uye iyo burr ye0.05 * 0.05 inogona kuwanikwa)
Double helix nemafuta esilicone, anotenderera madhigirii zana nemakumi masere, kune mudziyo unovhuvhuta mukati meiyo tsono pombi kana uchizora mafuta, iyo silicone oiri yakaiswa oiri kubva pasi kusvika kumusoro, ine barometer, inogona kusefa nekupomba kana iko kumanikidza kusiri kumusoro kune chiyero. Iyo gasi oiri inosvinwa mweya kuti isapinda sosi yemagetsi uye ikonzere moto. Mushure mekupedzisa siliconization, ichaenda kune inotevera marara kurambwa chiteshi.
Kuramba chiteshi chetsvina ndeye yakazara marara chigadzirwa kubviswa neCCD imaging uye kudonhedza kuona.
Yakareba-tsono inodzivirira kavha Inotakura
Inotora nzira yekutsvedza kurongedza sosi inodzivirira chifukidziro, iyo chinhu isimbi isina chinhu 304, mudziyo wekuona Autonics, kunyangwe paine sheath uye wozotamisa kune nzira yekutsvedza yekumutsa, mutsara wemberi wemuhara unongova nesirinda imwe kune imwe, remagetsi remagetsi The vharafu iri mumwe kudzorwa. Mushure mekunge sheath yaedzwa, kunyangwe tsono yacho isipo, shehe yacho haibviswe kana tsono yacho isipo, kuitira kuve nechokwadi chekuparadzwa kwevhavha uye chiyero chakakodzera chekutakura.
Pasi pechivande chekudzivirira, pane chinzvimbo chekuisa pakati pevhavha yekuchengetedza kuti uone kuti tsono inopinda muvharo. Mushure mekumanikidzwa, inozotumirwa kune chakapedzwa chigadzirwa chisina kuvhara
Rotary tsono dzakabatana zvakasungwa uye dzinoshandurwa neanogadzira, uyezve dzakatenderedza 180 madhigirii mushure mesiliconization, uye akawedzera kune imwe ficha
Nyoro inodzivirira kavha kurodha
Iyo yerabha yekuvhara inotora nzira yekutsvedza. Iyo yekuvhara yerabha inopfuura nekukurumidza uye inowira munzira yekutsvedza. Mucheka wacho unowira pachitete chetsono kuburikidza nezvikamu zvakagadziriswa. Mutsara wepamberi we sheath unodzorwa mumwe kune mumwe. Kana paine kushomeka kwezvigadzirwa, iyo sheath haizoisirwe. Iva nechokwadi chekuparadza kwemuhara uye chiyero chekupfuura cheiyo sheath yepamusoro.
Yakapfava Kavha kudzvanya
Iyo yerabha yekuvhara inosunga iyo yerabha sleeve zvakafanana uye inoitsikirira pasi, ichimanikidza yakavhara yerabha pasi
Ipfupi-tsono inodzivirira kavha Inotakura
Inotora nzira yekutsvedza zvakare, iyo simbi isina simbi 304, uye Autonics sensor kuona. Kunyangwe paine bhachi uye wozoendesa kune iyo slideway yekumhanyisa. Mutsara wepamberi wejasi unongova nesirinda imwe kusvika kune imwe. Iyo solenoid vharafu inodzorwa yega. Mushure mekuvhara kwayedzwa, kunyangwe tsono ikashaikwa, chifukidziro hachibviswe kana tsono yacho isipo, kuve nechokwadi chekuparadzwa kwevhavha uye chiyero chekupasisa chekavha kurodha.
Ipfupi-tsono kavha yekudzvanya
Ivhavha inosunga chifukidzo chipfupi chetsono yobva yatsikirirwa pasi, ichimanikidza chifukidziro pasi
Mushure mekupedzisa chigadzirwa kuburitsa, tendeukira kune yekudyisa tsono chigaro chiteshi, uye iyo yese kutenderera yapera.
IVEN Ropa Kuunganidzwa Tsono Assembly Mashini Makomborero
1.High chinzvimbo 12000pcs / awa.
2.High kushandisa michina, anonzwisisika mashandiro maitiro uye optimization yekubatanidzwa, 3-4 vane hunyanzvi varairidzi vanogona kubata izere yekugadzira tambo mushe kubva pakupemha kurodha kune yakapera tsono kuburitsa.
3.Iyo yakazara mutsara maitiro ekutsvaga mudziyo uyo wese anoshandisa yepamusoro lever brand senge Germany Lenuze, OMRON, kudzora kudya, kumhanya chiteshi, kuve nechokwadi chepamusoro chinokodzera chiyero.
5.Use kushandira mota kudzora kwezvakakosha zvikamu zvinofamba, kudzora kunyatso uye inofamba smoothy.
6.Iyo ine zvigadzirwa zvealam, zvakadai sekutadza, jamu yezvinhu, yakaderera mweya kumanikidza, uye kushayikwa kwesilicone mafuta, ichaita alarm uye inopa chiyeuchidzo kuHMI.
7.Key chikamu uye magetsi unit shandisa Top mhando kuti uone iyo yetambo mutsetse kugadzikana uye kwenguva yakareba kushandiswa.
8.High Quality Structure: Main muviri kutora yepamusoro simbi yekurema uremu, pamusoro uye zvekubatana zvigadzirwa chikamu chinotora iyo yepamusoro simbi isina simbi kuitira nyore kuchenesa. Sangana neGMP yakajairwa
9.Bvuma kugadzirisa pamwe neCCD.
Inoshanda Tsono Pen mhando
Kushanda Speed 10000-12000pcs / awa
CCD kuona kwakaringana kune tsono glitch 0.05 * 0.05 (yakavakirwa patip kureba kushivirira iri mukati me0.3)
Simba 380V / 50HZ, 18KW
Kumanikidzwa Mhepo Yakachena Yakadzvanywa Mhepo Kumanikidza 0.6-0.8Mpa
Yakamanikidzwa Mhepo yekushandisa 70 M3 / h
Nzvimbo Yekugara 6080 * 11200 * 1800 mamirimita (L * W * H)
Yakanaka mushandisi show
Pashure: LVP Otomatiki Mwenje Yekuongorora Machine (PP bhodhoro)
Zvadaro: Virus Sampling Tube Kuungana Mutsetse
Disposable Syringe & Tsono Production Line, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Ampoule Muchina À Coudre Led, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Machine À Coudre Singer, Ampoule Machine À Coudre Bernina,